သင်ဒီဂရီကိုစွန့်လွှတ်စရာမလိုဘဲဤပိတ်ဆို့မှုကိုကောက်ယူနိုင်သောဝါသနာ ၈ ချက် - ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ် - သတင်း
သင်ဒီဂရီကိုစွန့်လွှတ်စရာမလိုဘဲဤပိတ်ဆို့မှုကိုကောက်ယူနိုင်သည့် ၀ ါသနာရှစ်ချက်
ကာကွယ်ဆေးတစ်နိုင်ငံလုံးကိုလှိမ့်ချနေတုန်းကိန်းဘရစ်ချ်တက္ကသိုလ်ကထိုးသွင်းလိုက်ပြီ အွန်လိုင်းသင်ယူမှု၏တတိယသက်တမ်း ။ ကျောင်းသားများသည် ၄ ​​င်းတို့၏မိဘများအားသူတို့၏အခန်းများကိုသန့်ရှင်းရေးပေးရန်ပြောသည့်အပေါ်စိတ်မကျေမနပ်ဖြစ်ကြသည်။ ကောလိပ်တွင်စွန့်ပစ်ထားသည့်ကောလိပ်တွင်လမ်းလျှောက်သူများ မှလွဲ၍ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှမပါ။ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲရှိနေပါစေ၊ lockdown အောင်မြင်ဖို့ဝါသနာအသစ်တွေမစလိုက်ပါနဲ့။ နောက်ဆုံးတွင်သင်၏ခြောက်သွေ့သောအုပ်စုဖွဲ့စကားပြောရန်အတွက်ပစ္စည်းအချို့ပေးလိမ့်မည်။
အမြဲတမ်းစားပွဲခုံမှာထိုင်ရတာမောနေသလား။ Cindies မှာဂီတပျောက်နေပါသလား။ သင်၏ fabletics leggings အသစ်ဖြင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကိုလုပ်ရန်မကောင်းဘူးလား။ ယောဂကနေအေရိုးဗစ်အကအခုန်၊ တွန်းချခြင်း၊ ထိုင်ခြင်း၊ သင်လိုအပ်တာနဲ့စိတ်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးသင်ဘာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ အများကြီးရှိပါတယ် သင်ခန်းစာဗီဒီယိုများ အွန်လိုင်း။ လေ့ကျင့်ခန်းရဲ့ buddy လိုအပ်ပါသလား သင် Zoom တွင်သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်ပူးပေါင်းနိုင်မည်။ ရာသီဥတုသာခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်၊
နေသာသောနေ့၌သင်၏ကောလိပ်အနီးရှိလမ်းကြောင်းအသစ်များကိုရှာဖွေခြင်းထက်အဘယ်အရာက ပို၍ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းနိုင်မည်နည်း။
2. အချက်အပြုတ် Wizardry
ချက်ပြုတ်တာကအစမှာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပေမယ့်မလိုအပ်ပါဘူး။ ခေါက်ဆွဲမှသည် toasties အထိ၊ ဂရိသုပ်မှသည်ကိုရီးယား pibinbab အထိ၊ အစားအစာအမျိုးမျိုးကိုချက်ပြုတ်ခြင်းသည်ကမ္ဘာတစ် ၀ န်းခရီးသွားခြင်းနှင့်တူသည်။ သင့်အတွက်ဂျစ်ပစီတွင်အသုံးမပြုရသောခေါက်ဆွဲများမရှိတော့! သင်ကစူပါမားကတ်သို့ဗေဒပညာခရီးစဉ်နှင့်အတူတွဲသို့မဟုတ်အတော်များများလွဲချော် Cambridge ကအကြိုက်ဆုံးစမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။
စောင့်ပါ၊ ဒီမီးဖိုချောင်မှာ UFO လား။
သင်အလွယ်တကူစိတ်ဖိစီးမှုရသလား အဲဒီလိုဆိုရင်၊ တွယ်တာတာကမင်းအတွက်သင့်တော်တဲ့ဝါသနာပါ။ ချည်ထိုးခြင်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကုထုံးနှင့်သက်သာစေခြင်းကြောင့်သင်၏လက်များကိုအလုပ်များနေစေသော်လည်းသင်၏ ဦး နှောက်စွမ်းရည်ကိုမဖယ်ရှားပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင်သည်သင်၏လက်ဖြင့်တစ်ခုခုဖန်တီးနေသည်ဟုသင်ခံစားရသည်။ အပါအဝင်အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များအများကြီးရှိပါတယ် ဗီဒီယိုများ ဒါမှမဟုတ် လမ်းပြ ပြီးတော့သင်လုပ်ရမှာကစတင်ရန်ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးမိမိကိုယ်ကိုချုပ်ထားတဲ့ပဝါ။ ငါအားလုံးတောက်ပသောအရောင်များအကြောင်းကိုပေါ့!
4. Scrub-a-Dub Dub!
ဟင်းပွဲများကဲ့သို့ပန်းကန်ဆေးကြောနိုင်ပါတယ် အရမ်းပျော် ။ ပန်းကန်များကိုဆေးကြောခြင်းအားသင်၏စိတ်ကိုရှင်းလင်းစေမည့်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်သင်ယူဆပါက၎င်းသည်ငြီးငွေ့ဖွယ်ရာမရှိတော့ပါ။ ညစာစားပြီးနောက်မိသားစု၊ အိမ်သူအိမ်သားများနှင့်အတူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အနေဖြင့်အလုပ်လုပ်ရန်လည်းအချိန်ဖြစ်နိုင်သည်။ အဝတ်လျှော်, ခြောက်သွေ့။ လွယ်ပါတယ်။ သင့်အိမ်မှာတစ်ယောက်တည်းလား ပြဿနာမရှိပါဘူး။ ရုံမီးဖိုချောင်ထဲမှာဂီတနှင့်ပါတီဖွင့်!
သင်၏ကလေးဘဝအိပ်မက်ကိုသူလျှိုလုပ်ပြီးအကောင်အထည်ဖော်ပါ။ ဒါဟာရှုပ်ထွေးတဲ့ကြည့်ပေမယ့်တကယ်မခက်ဘူး။ ဒုတိယနှစ်သမိုင်းကျောင်းသားကေတီသည်ပထမ ဦး ဆုံးပိတ်ပင်တားဆီးမှုကာလအတွင်းစာတမ်းကိုကောက်ယူခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည့်အပြင်ဟောပြောပွဲမှတ်စုများကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၏ထပ်ဆောင်းဆုကြေးလည်းဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လျှို့ဝှက်ဘာသာစကားကိုတီထွင်ခြင်းနှင့်အပိုလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်!
ငါကျိန်ဆိုတယ်၊ (ဓာတ်ပုံအကြွေး: Katie Thacker)
6. '' ငါအချစ်ဇာတ်လမ်းအတွက်အဓိကဇာတ်ကောင်ပေါ့ '' လမ်းလျှောက်ထွက် Going
yeah ငါကအင်္ဂလန်ဖြစ်ပြီးရာသီဥတုကနေ့တိုင်းနေသာမဟုတ်နွေးဘူးဆိုတာသိပေမယ့်အပြင်ထွက်တာကိုတားဆီးစရာမလိုပါဘူး မင်းရဲ့လေဆံပင်တွေနဲ့လှည့်ပတ်သွားနိုင်ပြီးအဓိကဇာတ်ကောင်နဲ့တူတဲ့ပါးပြင်မျက်နှာသုတ်နေတဲ့ပါးပြင်တွေပေါ့။ အဘယ်သူသည်အခိုးအငွေ့သင်သည်ထိုသူတို့အဘယ်သူသည်ထိုအပိုလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ပေးမည်နည်း ကြည့်ရှုပါနှင့်သင်သည်သင်၏ရေစိုခံဂျာကင်အင်္ကျီဤမျှလောက်တန်ဖိုးထားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ရာသီဥတုသည်သင်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်သော့ချက်မဟုတ်ပါ
ငါအဓိကဇာတ်ကောင်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီမြင်းကြံ့ defo ဖြစ်ပါတယ်
သင်အထီးကျန်စိတ်နှင့် Self- ရောင်ပြန်ဟပ်မှုခံစားလျှင်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဂျာနယ်စောင့်ရှောက်ခြင်း မင်းအတွက်သင့်တော်တဲ့အရာ သင်၏ဂျာနယ်သို့မဟုတ်သင့်လက်တော့ပ်သည်သင်၏သစ္စာအရှိဆုံးနားထောင်သူဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်၏ခံစားချက်များကိုရေးချခြင်းကသင်၏နေ့ရက်များ၊ သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများ၊ သင်နှင့်အတူအချိန်လေးများ၊ ကြီးကြပ်ရေးမှူးများနှင့်စကားစမြည်ဝိုင်းများ၊ ၎င်းသည်လည်းသင့်ကိုကူညီသည် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလေ့ကျင့်ပါ နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုသို့မဟုတ်အဆိုးမြင်သက်သာ။ သင်ကကျည်ဆန်ဂျာနယ်နှင့်အတူကစူပါဗေဒစေနိုင်သည်။
ချစ်ခင်ရပါသောဒိုင်ယာလော့ ... Daphne Bridgerton နှင့်ကျွန်ုပ်ချစ်မိပါသည်။
ပျင်းနေသလား၊ သုတေသနအရ၊ အခန်းကိုသပ်သပ်ရပ်ရပ်ထားခြင်းကသင့်ကိုကူညီလိမ့်မည် စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချ နှင့် နေထိုင်ပါ ။ ပြီးတော့မင်းရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာသန့်ရှင်းတဲ့ကြမ်းတိုက်အဝတ်အစားနဲ့ရောင်စုံမိုးကာအင်္ကျီတွေသုံးပြီးသင့်အခန်းကိုနောက်ဖက်ရှင်ပြပွဲလေယာဉ်ပြေးလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ သေချာတာကလမ်းလျှောက်ပြီးအိမ်ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့အခါလူတိုင်းဟာစူပါမော်ဒယ်လိုခံစားရတယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တစ်ယောက်သာ?
ကောလိပ်သည်သန့်ရှင်းရေးကိရိယာများတပ်ဆင်ထားသည်။ Cambridge Cinderellas ဘယ်မှာလဲ
ဤစာရင်းတွင်ရှိသည့်အရာအားလုံးကိုလုပ်ပါ၊ ပြီးနောက်သင်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော၊ ရသဗေဒ၊ သပ်ရပ်မှု၊ ရောင်ပြန်ဟပ်၊ ဤခက်ခဲသောအချိန်တွင်ကျန်းမာရေးသည်စိတ်ပိုင်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းအရအရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ကြင်နာမှုရှိကြောင်းသေချာစေပြီးလုံခြုံမှုရှိစေပါ။
• Tab ၏လမ်းညွှန်။ ။ Cambridge တွင်မည်သို့ရေရှည်တည်တံ့နိုင်မည်နည်း
• Gyp သို့အလည်အပတ် - အရသာရှိတဲ့ Dahl၊ မျှော်လင့်စရာမရှိသောအဖော့များနှင့်အုန်းသီးဒိန်ချဉ်အတွက် Ode
• ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီးအိမ်တွင်းနေပါ - Eco-friendly lockdown တစ်ခုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်